Ikhaya STARS E-EUROPE Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Isikweletu Sezithombe: U-PremierLeague kanye ne-Twitter
I-LB inikeza iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwayo ngegama "I-whizzkid“. Indaba yethu ye-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuphila nokukhuphuka kuka-Aaron Connolly. Ama-Credits Ama-Image: Telegraph, Independent kanye ne-Twitter
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi wayengumuntu osemusha owayekhula phansi uSpurs ekuqaleni kwakhe okokuqala iPremier League ngesizini ye-2019 / 2020. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-biography ka-Aaron Connolly futhi ethakazelisa. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala phansi, amagama akhe aphelele ngu-Aaron Anthony Connolly. U-Aaron Connolly wazalwa ngosuku lwe-21st lukaJanuwari 2000 kunina, uKaren Connolly nobaba, uMike Connolly e-Oranmore, idolobha eliseRiphabhliki yase-Ireland. UCololly wayeyingane yokuqala ezalwa abazali bayo abathandekayo base-Ireland efanekiselwa ngezansi.
Hlangana nabazali baka-Aaron Connolly uKaren noMike. Isikweletu Sezithombe: Independent
U-Aaron Connolly unomndeni wakhe ovela e-Oranmore, idolobha elise-County Galway, entshonalanga ne-Ireland. Indawo avela kuyo ivame ukubizwa ngokuthi yi-Cultural Heart of Ireland, indawo eyaziwa ngokuphila kwayo okudumisayo neminye imikhosi eminingi yemikhosi.
Umbono omuhle we-Oranmore eGalway County, e-Ireland- lapho u-Aaron Connolly aqhamuka khona. Ikhredithi ku- I-Irelandbeforeyoudie
U-Aaron Connolly akakhuliswanga kwisizinda somndeni esicebile. Abazali bakhe babenjengabantu abaningi ababenza imisebenzi yase-Ireland ejwayelekile kodwa abakaze bazihluphe ngokuthola imali yokuthola umndeni. Ngokwemibiko yabezindaba zenhlalo, u-Aaron Connolly wakhula eceleni komfowabo ogama lakhe ngu-Ethan Connolly naye njengaye, waba ngumlandeli webhola.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Abazali baka-Aaron Connolly ekuqaleni babefuna ukuthi indodana yabo ibe yisifundiswa ngaphandle kokucabanga ukuthi uzoke ayenze yini kwezemidlalo. Ngaleso sikhathi, uCololly wayehamba ngokuzikhandla esikoleni saseBrierhill National School esisempumalanga yeGalway. Ngenkathi usesesikoleni, wayeneso elibukhali enkundleni yebhola eceleni kwesikole esivame ukudlala ibhola ngemuva kokuba enziwe ngezifundo.
Owayenguthisha wesikole iBatchhill National ehamba ngegama likaConor Hogan ukhumbula omncane u-Aaron Connolly njengomfana omncane owayezogqoka amajezi ebhola endiza kule ndawo futhi ekhahlela ibhola likanobhutshuzwayo, noma ngabe isimo sezulu sinjani.
Izinsuku zokuqala zika-Aaron Connolly nesikole iBatchhill National. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter
"Benginguthisha obambele laphaya izinyanga eziyisithupha futhi ngiyakhumbula ukuthi ikilasi lakhe lalinabafana abancane be-30 kanti u-Aaron Connolly wayephakathi kwabafana abambalwa ababedlala imidlalo." UConor Hogan, uthisha wakhe wangaphambilini u-Aaron uyakhumbula.
Njengomshayeli osemncane, u-Aaron Connolly wafunda ukuhweba kwakhe kwebhola njengento enzima, elandayo eya phambili. Ngesinye isikhathi, kwenzeka kubazali bakhe ukuthi akuzange kube nokungabaza okukhulu ukuthi u-Aaron wayeqondise indlela efanele. Ekugcineni, ukuziqhenya kwamalungu omndeni ka-Aaron Connolly kanye nothisha besikole bengazi mingcele lapho emenyelwa esifundweni saseMervue United.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngonyaka we-2011, u-Aaron Connolly wathuthela ekilabhini yaseGalway yasenkulisa eyayiseMervue United lapho ayemukelwa khona esikoleni ngemuva kokuphasa izivivinyo zakhe ngemibala endizayo. Ukuqonda isifiso somfana wabo sokudlala ibhola ukuze aziphilise, abazali bakaConnolly benza konke okusemandleni ukusekela izifiso zakhe.
U-Aaron Connolly Ukuphila Kwasemsebenzini Kwasekuqaleni. Isikweletu ku-Twitter
Akuzange kuthathe isikhathi eside ukuthi u-Aaron Connolly azivumelanise nezimo futhi aqale ukwenza umdlandla ku-academy futhi abambe imbeko yakhe yokuqala yezemidlalo (bheka ngenhla). Wenyusa amabombo ngokushesha okukhulu futhi wamenyelwa ukubamba iqhaza emiqhudelwaneni eminingana yezemidlalo.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Indaba yokuqala yokuphumelela kwebhola lika-Aaron Connolly yeza emqhudelwaneni othile lapho eshaya izikhathi ze-18 njengomuntu oneminyaka engu-15. Ukuphumelela kwe-whizkid kumbone esiza iqembu lakhe ukuthi liphumelele indebe yendawo okwakusho lukhulu kubazali bakhe.
U-Aaron Connolly Road to Fame Indaba. Ikhredithi ku- Independent
Ngenxa yempumelelo yakhe, waba ngumdlali ohamba phambili kulo lonke elaseCastlegar, eGalway, e-Ireland. Lokhu kubuye kwamtholela ithuba lokuthi athole ihlombe ngamaqembu aphezulu e-English amaqembu phakathi kwawo kwakunguBuron.
Ngonyaka we-2016, u-Aaron Connolly wenza isinqumo aqhubeke nenqubo yakhe yokuvuthwa kwebhola phesheya. Lesi kwakuyisikhathi enza a uqhubekele ngaphesheya koLwandlekazi lwase-Ireland, ujoyine uBrighton & Hove Albion ommemele ukuthi azoquliswa icala ngemuva kokubona ukusebenza kwakhe. Uhlaba umxhwele ngokwanele ngesikhathi sokuvivinywa kwakhe neklabhu ukumnikeza umfundaze weminyaka emibili. Ngawo lowo nyaka i-2016, waphinde wamenyelwa ukuyomela i-U17 yakhe yase-Ireland futhi wabamba iqhaza kwi-Ireland School FA Cup ayinqobile.
U-Aaron Connolly ngemuva kokuwina indebe ye-Ireland ye-Ireland. Isikweletu Sezithombe I-TheArgus
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
U-Aaron Connolly wakhula esuka emandleni emandla kuzo zonke iklabhu yebhola nezwe. Ku-2017, waba ngumgadli ohola phambili esigabeni esifaneleyo se-2017 UEFA European Under-17 Championship, washaya amagoli ayisikhombisa emidlalweni eyisithupha.
Lokhu kusebenza kwamenza washeshe walandelwa ohlangothini lweBrighton & Hove Albion ngaphansi kwe-23 lapho enza khona izinto zakhe njengoba eseneminyaka eyishumi nesikhombisa kuphela. Uthi bewazi?… Uhlangothi lwe-Under-23 lwaba yimpumelelo kuye njengoba ayenjalo Umdlali ogama lonyaka kwi-2018 / 2019 Premier League's under-23 use-up, njengoba ethole amaphuzu e-11.
U-Aaron Connolly- I-Premier League2 2018-2019 Player of the Season Award. Isikweletu: I-Twitter
Ukuthola lo mklomelo omuhle kwadonsela ukunaka kwemenenja yeqembu eliphakeme uGraham Potter owenze ukuthi abuyiselwe eBuhle kwaBrighton ngemuva kokukopishwa ngemalimboleko evela eLuton Town.
U-Aaron Connolly wakhuthazelela ukukhuphuka kwesimo sezulu esiphakeme sokuba ngumuntu ovelele kwi Usuku lwe-5th luka-Okthoba kumdlalo ophikisana Tottenham lapho washaya khona igoli lakhe lokuqala lePremier League, washaya amahlandla amabili ukunqoba kwasekhaya kwe-3-0. Ngezansi kwesiqeshana sevidiyo. Credits to SpursTV.
Uthi bewazi?… Lezo zinhloso zenze uConnolly wase-100th wase-Ireland ukuba athole umgomo wePremier League kanye nowokuqala osemusha ukuthola igoli kuBrighton ezingeni lePremier League.
U-Aaron Connolly ugubha umgomo wakhe odumile ngokumelene neSpurs. Isikweletu: Ezimele
Ngaphandle kokungabaza, ingane emangalisayo isimfakazele abalandeli bebhola ukuthi umugqa wokukhiqiza wase-Ireland uya phambili Hhayi, QHAFA!. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva kwayo yonke indoda ephumelelayo, kukhona umuntu wesifazane. Kumdlali webhola lezinyawo onjengoCololly, impela kukhona i-WAG ebabazekayo ... ebhekise kwintombazane yakhe enhle egama linguLucinda Strafford. Njengoba kuvezwa yi-akhawunti yakhe yezokuxhumana, bobabili abathandi baqala ukuthandana ngoJanuwari 2019.
Intombazane enhle ka-Aaron Connolly- Intombazane enhle kaLucinda Strafford. Isikweletu ku-Instagram
Ngokungangabazeki uLucinda Strafford ungumdwebi omuhle oqinisa ukuzethemba kiwo wonke umuntu oziphuphayo. Ungumuntu ongazinikeli enza okungaphezu kokuhlinzeka ngokusekelwa ngokomzwelo endodeni yakhe yize kusho impilo yakhe.
U-Aaron Connolly unentombi esekela kakhulu. Isikweletu ku-IG
Enye yezindlela zombhangqwana ezithandwayo ehlobo phakathi kwesiqhingi Isiqhingi saseSpain Tenerife kanye namanzi e-Ibiza. Njengoba kuphawulwe ngezansi, uLucinda uthanda kakhulu u-Aaron Connolly, ajwayele ukumbiza ngokuthi “inkosana yakhe".
U-Aaron Connolly ujabulele ukugibela isikebhe nentombi yakhe- uLucinda Strafford
Bobabili u-Aaron Connolly nentombi yakhe uLucinda bamane nje baba ngomunye wemibhangqwana esungulwe kakhulu yeBrighton & Hove Albion Football Club. Iqiniso lokuthi bobabili bathandana isikhashana manje lishiya kungangabazi ukuthi umshado kungaba isinyathelo esilandelayo essemthethweni.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi ama-Aaron Life amaqiniso ka-Aaron Life kude nokumbona esenzelwa umsebenzi kuzokusiza uthole isithombe esiphelele ngaye.
Ama-Aaron Connolly Life Life. Isikweletu: I-Twitter
Ukwehluka kusuka esithombeni ngenhla, uzokwazi ukuthi u-Aaron Connolly ungumuntu onobuhlakani futhi onomdlandla othanda ukuhlala ejabule ngalokho anakho. Uthola ukuzivumelanisa kalula namandla amzungezile futhi asebenzisa ingqondo yakhe kuwo wonke amathuba.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
U-Aaron Connolly uyajabula ukuthola indlela yomndeni wakhe ebheke ekuzimeleni kwezezimali ngenxa yebhola. Kusukela ezinsukwini zakhe zobusha, abazali bakhe babedlale indima evamile yokuthatha wonke amathuba ukumbona edlala yonke imidlalo yakhe.
U-Aaron Connolly nabazali bakhe abamesekayo ngemuva kokuwina indebe.
Bobabili uMike noKaren babamba indiza yokuqala ukuze babone ukuqala komfana wokuqala wePremier League kanye nezinhloso ezimbili zokuqala. Ngenkathi uConnolly ethatha lesi senzo, ubaba wakhe oziqhenyayo uyazi ukuthi indodana yakhe iwafezekisile amaphupho akhe.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ukwazi indlela yokuphila kaConnolly maqondana nendlela asebenzisa ngayo imali yakhe kungakusiza uthole isithombe esingcono ngaye.
Ukuqala, ukunquma phakathi kokusebenziseka nenjabulo okwamanje akusona isinqumo esinzima kumntwana we-Whiz. Ukwenza imali ebholeni kuyinto nje edingekayo kodwa ukuyisebenzisa kwintombi yakhe uLucinda Strafford njengoba behambela izibonelo ezinhle lapho beya khona; ( IJamaica, iSt Lucia, iMauritius, i-Ibiza, i-Antigua neLas Vegas) kubonakala kuye, indlela yokuphila ejwayelekile.
Ama-Aaron Connolly Lifestyle Amaqiniso. Isikweletu ku-IG
Ukuphila kuka-Aaron Connolly akuyona into exakile njengoba umuntu angacabanga ngemuva kokubuka isithombe esingenhla. Kubukeka sengathi usenesisekelo esiqinile sokugcina imali yakhe ihlanzekile futhi ihleleke kahle. Njengasikhathi sokubhala, azikho izimpawu zeCololly showcasing flashy / exotic izimoto, izindlu, iwristwatch ebizayo njll.
Ama-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Isibonelo Sakhe Sokulinganisa: Njengabaningi bebhola lezinyawo e-Ireland, uCololly uthandela inganekwane yase-Ireland, uRobbie Keane afaniswa naye. Wamphindisela ngokuba yintombazane yokuqala yase-Ireland (selokhu uRobbie Keane ese1999) ukuthola i-brace kumdlalo we-English top-flight. Ngezansi kunamanye amasu akhe wokushaya amagoli afaniswa neNqaku leRobbie Keane. Isikweletu kuma-VTSports
Ucabanga ukuthi ukubizelwa kwakhe esikhundleni kwakuyiprank: Ngemuva nje kwesonto ngemuva kokubambana kwakhe nabakwaSpurs okumthathe waba ngumdlalo wombukiso, u-Aaron Connolly, Ngokuhamba kwesikhathi ngalolo suku bathola ukubizelwa kumphathi omkhulu wase-Ireland uMick McCarthy ngokudlalela izwe labo okulandelayo i-Euro 2020 yokuhlungela i-Georgia neSwitzerland. Ubone sengathi kuyinhlokomo ngemuva kokutshelwa ngalezi zindaba. Abanye, njengoba abona, baba umlando.
U-Aaron Connolly uxoxa nomphathi we-Ireland, uMick McCarthy, ngemuva kosuku olulodwa ngemuva kokubizelwa kwakhe eqenjini lase-Ireland. Isikweletu ku-Sportsfile kanye Independent
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda yethu i-Aaron Connolly Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Brighton ne-Hove Albion Football Diary
Idayari yebhola lase-Ireland